>why Burma Prisoners’ Day? | MoeMaKa Burmese News & Media
>why Burma Prisoners’ Day?
သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၀
ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ၀င်းဗိုလ် သေဆုံးခဲ့သည့် မော်လမြိုင်ထောင်။ အာဏာပိုင် ၂၇ က ရိုက်နှက်သဖြင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ – Joinai)
“- – – ကလေးစစ်သား နှစ်ဦး လိင်တူချင်း ဆက်ဆံခံရခြင်းကို ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သားကောင်း ပီသ၏။ မျိုးချစ်စိတ်ကောင်း ပိုင်ဆိုင်သူလည်း ဖြစ်၏ – – – “
နှစ်စဉ် သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ကို ‘မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများနေ့’ Burma Prisoners’ Day (BPD) အဖြစ် ကျင်းပသင့်၏။ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မော်လမြိုင် အကျဉ်းထောင်အတွင်း၌ နှစ်စဉ် ကျင်းပခဲ့၏။ ကျင်းပရခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ ၂၆.၈.၂ဝဝဝ ရက်နေ့ ည ၇း၃ဝ နာရီအချိန်တွင် မော်လမြိုင်ထောင် ကြိုးတိုက်အတွင်း၌ ထောင်အာဏာပိုင် ၂၃ ယောက်သည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ကိုဝင်းဗိုလ်အား နောက်ပြန် လက်ထိပ်ခတ်လျက် လည်ပင်း နင်းပြီး မသေမချင်း ရက်စက်စွာ ရိုက်သတ်ခဲ့ကြသည်။
န.အ.ဖ ၏ စစ်ဖိနပ်အောက်ဝယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး များစွာကို နင်းချေ ဖျက်ဆီးခံနေရ၏။ လူသားချင်း စာနာစိတ် ကင်းမဲ့စွာ တရားလက်လွတ် ပြုကျင့်မှုများသည် ပြည်သူ သန်းပေါင်း ၆ဝ ကျော် အတွက် အနာဂတ် ဆိုသည်မှာလည်း ရှာမရနိုင်အောင် ဖြစ်နေရ၏။ အကျဉ်း ထောင်အတွင်း၌ အကျဉ်းသားများကို မတရား ရိုက်နှက်ခြင်း၊ အလုပ်ကြမ်း ခိုင်းခြင်း၊ ရဲဘက် ပို့ခြင်း၊ စစ်ပေါ်တာ အဖြစ် အသုံးပြုခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးဝါး လုံလောက်စွာ ကုသမှု မခံယူရခြင်း၊ အစားအစာကို မသေရုံ တမယ် ကျွေးခြင်း… အစရှိသည့် မတရားမှုများကို န.အ.ဖ လက်ပါးစေ ဖြစ်သည့် ထောင်အာဏာပိုင်များသည် ရက်စက်စွာ ကျူးလွန်နေကြ၏။
ထိုသို့ အစဉ်မပြတ် ကျူးလွန်နေသည့် မတရား ဖမ်းဆီးမှုများ၊ ဥပဒေမဲ့ ပြုမှုများ၊ ဖိနှိပ်မှုများကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူ သန်းပေါင်း များစွာသည် သိရှိ လာပြီး စာနာ ထောက်ထားလာစေရန် အတွက် နိုင်ငံတကာမှ အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး တောင်းဆိုချက် တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် မြှင့်တင်၍ ပြည်တွင်းမှ အထူးသဖြင့် အကျဉ်းထောင်များ အတွင်းမှ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ စတင်နိုင်ရန်နှင့် နောင်လာမည့် အနာဂတ်တွင် စစ်အာဏာရှင် စနစ် ခေါင်းမော့ မလာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကိုဝင်းဗိုလ် ကျဆုံးသည့်နေ့အား ‘မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းသားများနေ့’ အဖြစ် ကျင်းပသွားရန် မော်လမြိုင် အကျဉ်းထောင်ရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများက တညီ တညွတ်တည်း အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
‘မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းသားများနေ့’ ကျင်းပရခြင်းသည် …
လူမဆန်မှုနှင့် မင်းမဲ့စရိုက် ကြီးစိုးနေသည့် န.အ.ဖ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် လက်တံများစွာကို ဖြန့်ကျက်ထား၏။ သတင်းပေး၊ စွမ်းအားရှင်၊ ကြံ့ဖွံ့၊ မိ/စောက်၊ အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်း၊ စစ်ဘက်၊ ရဲဘက် လက်မရွံ့ ပါးကွက်သားများဖြင့် မြန်မာပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးအား အကြောက်တရားများ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုမို ကျယ်ပြန့်လာစေရန် စနစ်တကျ စီမံကိန်းများ ချ၍ ကျူးလွန်နေကြသည်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၈၈-မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသည့် မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ မင်းဇေယျာ၊ အံ့ဖွယ်ကျော်၊ ဂျင်မီ … အစရှိသည့် လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် အခြား ရဲဘော် ရဲဘက်များကိုလည်း မတရား ဖမ်းဆီး၍ ပုဒ်ထီးပုဒ်မ အမျိုးမျိုး တပ်ပြီး နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ထား၏။
ထိုသို့ ပြုကျင့်နေခြင်းတို့သည် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေ စံချိန် စံညွှန်းများနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျ မဟုတ်ခြင်း၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်နေခြင်းများကို ဆက်တိုက် ပြုကျင့်နေကြသဖြင့် … သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ‘မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများနေ့’ အခါသမယတွင် ကျဆုံးသွားသည့် ကိုဝင်းဗိုလ်နှင့်တကွ လက်ရှိ အကျဉ်းခံဘဝတွင် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသား ပြည်သူသန်းပေါင်း ၆ဝ ကျော် ကိုယ်စား န.အ.ဖ စစ်အာဏာရှင်များကို နိုင်ငံတကာမှ စစ်ရာဇဝတ်ကောင်များ နည်းတူ ၎င်းတို့ ကျူးလွန် ခဲ့သည့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို တရားစီရင်နိုင်ရန် အတွက် ကုလသမဂ္ဂက ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ် ဖွဲ့စည်းသည့် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် တစ်ရပ်ကို အမြန်ဆုံး လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ပေးပါရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။